हिजो मलाई मतदान नगर्नेहरु अहिले पछुतो मान्दैछन् – सांसद् दवाडी
फाल्गुण ४ २०७८
काठमाडौं । धेरैजसो सांसद्हरुले आफ्नो पार्टीका मान्छेको मात्र काम गर्छन् भन्ने जनताको गुनासो आउने गरेको छ ।
पार्टीको भन्दा पनि माथि गएर उनीहरु गुटको पक्षका मान्छेलाई मात्र सहयोग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ तर त्योभन्दा अलिकति फरक छन् गोरखाको क्षेत्र नम्बर २ को (ख ) प्रदेशबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद् प्रकाशचन्द्र दवाडी ।
उनी विकासको काममा कसैलाई पनि राजनीतिक रुपमा विभेद गर्दैनन् । उनले आफूलाई मतदान गर्ने र नगर्ने सबै आफ्नै मान्छे भएकाले सबैको भावनाको कदर गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व भएको बताउँदै आएका छन् । उनले हिजोको दिनमा आफूलाई मतदान नगर्नेहरु पनि कुनै गुनासो गरेका छैनन् ।
‘अहिले उहाँहरु मलाई मतदान नगरेकोमा पछुताउँदै हुनुहुन्छ, अब कहिले निर्वाचन होला र मलाई भोट हाल्न पाइन्छ भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ’ उनले भने ‘हिजो कसले के कारणले अथवा कसैको आशले र प्रलोभनले कताकता मतदान गर्नुभयो म त्यतातिर जान्न अब मलाई मतदान गर्नेमा शंका छैन ’ दवाडीले भने ।
दवाडीले सांसद्बापत पाएको सबै रकम जनताको सेवामा नै खर्च गरेका छन् । उनले केही दिनअघि पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर पछिल्लो एक वर्षको खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । उनले संसद् भएबापत पाएको ७ लाख ८२ हजार ३ सय ५६ रुपिँयामा थपेर जम्मा १३ लाख ६३ हजार ८ सय रुपिँया विभिन्न सामाजिक सेवामा खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका प्रवक्ता र पार्टीका प्रदेश कार्यसमितिका सदस्यसमेत रहेका उनले सांसदमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै आफूले पाउने तलवभत्ता सामाजिक कार्यमा लगाउने घोषणा गरेका थिए । उनले विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था, क्लव, आमा समूह, महिला समूह गरी एक वर्षभित्रमा ३१ संघसंस्थालाई सहयोग गरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफ्नो क्षेत्रमा कसैलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सधैं सहयोग गर्दै आएका छन् । उनले कसैलाई पनि दुःख परेको हेर्न नसक्ने भएकाले आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म सहयोग गर्दै आएको जनाएका छन् । उनले किरियामा बसेका नागरिकलाई किरिया खर्च पनि दिएका छन् भने जाडोमा कपडा लगाउन नसक्नेलाई आफ्नै ज्याकेटसमेत फुकालेर लगाइदिएका छन् ।
उनले मंगलबार फेसबुकमा पोष्ट गरेको स्टाटस केही सम्पादनसहित जस्ताको त्यस्तै ‘नमस्कार, यतिबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा २ (ख) को बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा जनताँंग भेटघाट र अन्तरक्रियामा व्यस्त छु । प्रदेश सांसदको रूपमा निर्वाचित भएपश्चात बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा यो मेरो १०३ औं पटकको औपचारिक यात्रा हो ।
यसक्रममा वृद्ध बुबाआमादेखि नयाँ पुस्ताका युवा साथीहरूसँग थुप्रै अन्तरक्रियाहरू भए । उहाँहरूको सबै गुनासाहरू मैले सम्बोधन गर्न नसके पनि सम्बन्धित ठाउँमा जनताको आवाज जस्तातो त्यस्तै मैले उठाउँदै आएको छु । हुन त हामी सरकारमा छौं । कतिपय कुराहरू सामान्य हुँदाहुँदै पनि हामीले सम्बोधन गर्न सकिराखेका छैनौं तर पनि तपाईको आवाज सम्बन्धित ठाउँमा बोलिरहेको छु । समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेकै छु । मलाई तपाईहरूले जनताको काम गर्न निर्वाचित गर्नुभएको हो ।
तपाईहरूका समस्या र गुनासाहरू मलाई जति धेरै राख्नुहुन्छ उति धेरै म खुशी हुन्छु । आज सके आज हुन्छ नसके भोलि हुन्छ तर जनताको आवश्यकता पूूरा हुनैपर्छ र त्यसका लागि जनताको बीचमा म सधै उपस्थित हुन्छु । आज तपाईहरूको माया र सद्भावले मलाई गाउँ र बस्तिमा पुग्न जुन उत्प्रेरणा मिलेको छ त्यसको लागि तपाईहरूप्रति सधै आभारी छु । म तपाईहरूसँग एउटा प्रतिनिधि÷नेताको रूपमा मात्रै होइन समाजको सदस्यको रूपमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु ।
तपाई जसनसुकै विचार वा पार्टीलाई समर्थन गर्नुहोस् तपाईंको समस्या मेरो हो किनकि तपाईले मलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित गराउनुभएको हो त्यसैले आउनुहोस् समाजको विकासको लागि सहकार्य गरौं । तपाईका समस्या र गुनासा कहाँ राख्नुपर्ने हो म तपाईसँगै उपस्थित हुनेछु ।
धन्यवाद, जय नेपाल ।
‘मेरो राजनीति तपाइको सेवाका लागि, मेरो राजनीति समाजको टेवाको लागि’ भन्ने मूल नारा अघि सारेर हिँडेका उनले नारा बनाएजस्तो काम पनि गर्दै आएका छन् । उनी सधैं भ्रष्टाचार र अनियमितताको विपक्षमा बोल्दै आएका छन् । उनले आफूले भ्रष्टाचार गरेको कसैले प्रमाण भेटे आजै राजनीति छोडिदिने भन्दै आएका छन् । ‘मैले कमाउनलाई राजनीति गरेको होइन, केही दिन सकौं भनेर लागिरहेको छु’ उनले भने ‘भोलि कुनै स्वार्थ राखेर अहिले सेवा गरेको हो कि भनेर भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछु ।’ उनले पार्टीले आगामी दिनमा दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले कोरोना संक्रमणका बेला जिल्लामा मास्क, सेनिटाइजर वितरणका साथै अक्सिजन मेशिन ल्याउने र व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कुरामा पनि सक्रियता देखाएका थिए । उनले वितरण गरेको औषधिको विषयलाई लिएर विपक्षी पार्टीले गलत प्रचार गरेको थियो । ‘भन्नैपर्छ मेरो लोकप्रियता उनीहरुले हेर्न सकेनन्, केही आरोप लगाउन नपाएपछि मिति सकिएको औषधी बाँड्यो सांसद्ले भनेर प्रचार गरे ’ उनले भने । कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड मिलाइदिने मात्र गरेनन् खर्चको अभावमा उपचार गर्न नसकेकालाई आर्थिक सहयोग पनि गरे ।
उनी सधैं जनताको माझमा नै पुगेर उनीहरुको दुःखसुख बुझ्दै आएका छन् । कसैलाई केही समस्या परेमा सकेको खण्डमा तत्काल समाधान गर्ने गरेका छन् भने सम्भव नभए सरोकारवाला निकायमा आफैं पुगेर समाधानको लागि पहल गर्दै आएका छन् ।
‘अहिलेसम्म विवादित छैन म, केही स्वार्थ नलिएपछि जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छु’ उनले भने ‘मैले निर्वाचनमा जाँदा जे भनेको थिँए त्यसमा तलमाथि गरेको छैन, म पदमा हुन्छु वा हुन्न गौण हो तर जनताबाट कहिल्यै पनि अलग हुन सक्दिन ।’
२८२ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन पार्टीले कति तह जिते ?
संघीय संसद्को ११औं अधिवेशनमा एमालेले के गर्ला ?
स्थानीय तह निर्वाचन परिणामबाट आत्तिनुपर्ने छैन, तर समीक्षा गरिन्छ : माधव नेपाल
बुटवलको तिलोत्तमा गणना स्थगित , कारण यस्तो
पोखरामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यको अग्रता कायमै
अहिले पनि सत्तारुढ गठबन्धन चुनाव सार्न बालुवाटारमा बैठक बस्दै छ : ओली
नेपालको चुनौती र सम्भावना ठिक ढंगबाट पहिचान गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल
भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई ३५ दिनमै ८ अर्ब घाटा, कुलमान भन्छन् कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ हुन दिँदैनौँ
एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन : कांग्रेस नेता पौडेल